Iyo CM Mask Kambani Nhoroondo - Jiande Chaomei Mazuva ese Chemicals Co, Ltd.
Lin Jinxiang, muvambi waChaomei - mutungamiri wepamba mumunda wekudzivirira kwekufema
Mutevedzeri weMutungamiriri weChina Textile Bhizinesi Association, Mutungamiri weZhejiang Kudzivirirwa uye Hutano Dziviriro Zvigadzirwa Sangano, Sachigaro weJiande Chaomei Mazuva ese Chemical Co, Ltd.
Jiande Chaomei Mazuva ese Chemical Co, Ltd. inozivikanwa "chiratidzo chegoridhe" mumunda wekudzivirira kwekufema muindasitiri yebasa inishuwarenzi. Mushure memakore anopfuura makumi mana ekushanda nesimba, pasi pehutungamiriri hwaSachigaro Lin Jinxiang, Chaomei akaiswa pamberi pamberi pezvigadzirwa zvakafanana maererano nebhizinesi, chikamu chemusika uye simba rechiratidzo, uye akaverengerwa mubato rechitatu re "Made in Zhejiang" zviyero zvakajairika zvekunyora, "PM2.5 Masikisi ekudzivirira" boka rakajairika fomu yekuumba, uye chikamu chekunyora cheyero yenyika yekudzivirira masipireti nyaya kufema. North Korea haina kungowana chete rezinesi renyika yekugadzira zvigadzirwa, asiwo rezinesi rekurapa nehutano. Iyo ndeimwe yemakambani mashoma epamba anogona kuburitsa mamaki ekumaindasitiri, ehurumende, uye ehutano ekuchengetedza.
Pakati penzira, Lin Jinxiang anonzwa kuti pane nzira refu yekufamba, uye haashinga kuregera kana nepadiki pacho, zvichitungamira bhizinesi kushinga kusimuka kuenda kumberi mumhepo yehupfumi hwemusika uye kumutsiridza. Munguva pfupi yapfuura, mupepeti weChina Labor Insurance Network akaita hurukuro yakasarudzika nasachigaro Lin Jinxiang.
Unogona kutakura kusurukirwa, unogona kubata hope
Hunhu hwekuremekedza hwaLin Jinxiang hunouya kubva pane zvaakamboona. Tichitarisa kumashure kuna 1978, murimi mudiki akatanga bhizinesi rake nekutengesa mota yehuni ye30 yuan uye kukwereta makumi maviri. Mumakore gumi, aive ese ari mubati uye mutengesi, achitengesa mops, magorovhosi akarukwa, uye zvigadzirwa zvemagetsi. Kuitira kuchengetedza mari pakutanga kwebhizinesi, Lin Jinxiang akatora makeke emupunga akagadzirwa naamai vake pese paaienda kunogutsa nzara yake. Kurapa kwakanyanya husiku yaive hotera yemashanu yuan husiku, uye aipedza husiku munzvimbo dzakachengetedzwa. Mazhinji enzvimbo dzekuendesa ane makomo, ane mapundu uye ane njodzi. Lin Jinxiang aisaziva kuti ziya rakawanda sei raakadurura parwendo rurefu. Mumashoko ake, hapana chinhu chiri nyore kuita munyika. Kana iwe uchida kupfeka korona, iwe unofanirwa kutanga watakura huremu.
Anopfuura makore makumi maviri ekuberekwa izera rekushinga kushanda nesimba. Lin Jinxiang akati: "Ndakarasika pandakasangana nezvipingaidzo, asi handina kumbofunga zvekurega. Iye zvino ndinodada nekumisikidza indasitiri yekuyera yevana vane makore ekushanda nesimba. Ini ndinofunga muzvinabhizimusi wese ari kuda Bhizinesi ini zvave kurwira zvinogona kupfuudzwa pasi, uye ikozvino ndave kuona vanakomana vangu vaviri vachishanda nesimba kuti vatore zita rakanaka reKorea neAmerica. Ndiri kufara kwazvo. "
Achitaura nezvekunetsekana munguva yakapfuura, Lin Jinxiang haana kunzwa zvakanyanya, "Chokwadi, chizvarwa chedu chine rombo rakanaka. Mushure mekugadzirisa uye kuvhura, mutemo wenyika unokurudzira bhizinesi, saka ndine mukana wekuita zvandinoda. "Kana munhu achida kubudirira, Chekutanga, tinofanira kudzidza kutsungirira nhamo, kutsungirira kusurukirwa, uye kubata zviroto."
Zadzisa mutoro wenzanga uye utaure nezveinishuwarenzi yebasa
Muna 1996, Lin Jinxiang akatanga kumisikidza fekitori kuti ibudise masiki pasi pekuunzwa kweshamwari, asi pakutanga, huwandu hwacho hwaive hwakawandisa nekuda kwekutengesa kwakashata. Nekuona kuti kambani yaive mumatambudziko emari, mhuri yake yakashandisa mari yavo yese kumutsigira. Ndokunge, kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, Lin Jinxiang haana kuzununguka kunyangwe paine matambudziko makuru akasangana nawo: Kuita chigadzirwa chakanaka uye kambani yakanaka ndiyo yakanakira kudzoka kumhuri yake.
"Pakutanga, ndaingofunga kuti kuita bhizinesi reinishuwarenzi yebasa kunogona kutsigira mhuri, asi nekuzviita, ndakadanana neindasitiri inoyevedza uye ine mutsa. Maererano neshoko rakakurumbira izvozvi, zvinonzi kusakanganwa chinangwa chekutanga. Kufunga nezvazvo izvozvi, kutsauka pane dzimwe nguva chinhu chakanaka. Nekuda kwako Kuda, mimwe mifungo ichagara iri mupfungwa dzako. Handizive kuti ichibereka rudzii ... "Lin Jinxiang anofarira kutsvagurudza uye ane maonero ake akasarudzika ekushambadzira. Iye anozvipira kune basa. Uye "kuda" kwakamuita iye, uye kwave kuita Korea neAmerica nhasi.
SARS yakapenga muna 2003, uye mishumo ye "Severe Respiratory Dysfunction (SARS)" yakaonekwa munzvimbo zhinji dzepasi. Indonesia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, United States, Canada nedzimwe nyika zvakateerana zvakaona zviitiko zvakawanda zveSARS. Muna 2004, Dhipatimendi reMedical Chemistry yeNational Development uye Reform Commission yakaona kuti North Korea neUnited States dzinofanirwa kuve batch yekutanga yemabhizimusi ekuchengetera zvinhu emabhizinesi emunyika (iyo North Korea neUnited States ndiyo yanga iri emergency yenyika zvinhu zvekuchengetedza unit for 14 akateedzana makore). Kusvika nanhasi, North Korea neUnited States vachiri nebasa kupa nyika. Basa rakakosha rekuyamura zvekukurumidza. Lin Jinxiang achiri kurangarira zvakajeka chiitiko chemasiki mazana maviri ezviuru achiendeswa kuBeijing Xiaotangshan Hospital nendege yakakosha. Vachiona chiitiko chemusangano wevatori venhau, hutungamiriri hwepakati nevashandi vese vakapfeka mamask ekuNorth Korea neAmerican, Lin Jinxiang akanzwa kekutanga basa rakanaka remunhu inishuwarenzi yebasa.
Munguva yeSARS nguva, North Korea neUnited States vakasimbirira pakusasimudza peni uye nekushinga kutakura mamask kuenda kunzvimbo dzavainyanya kudiwa. Izvi zvakakunda rumbidzo kubva kune vaaishanda navo muindasitiri uye ndokumisikidza chinzvimbo chinotungamira cheNorth Korea neUnited States muindasitiri yeinishuwarenzi yevashandi
Mushure mekunge SARS, North Korea neUnited States vanyatso tarisa pakuzadzikisa mabasa emakambani: Kunyangwe yaive kudengenyeka kwenyika kweWenchuan, kuputika muTianjin Port, kana kubuda kwechirwere cheshiri, North Korea neUnited States zvakapa zvisina tsarukano dziviriro yekufema yemahara. zvigadzirwa kunzvimbo dzenjodzi panguva yekutanga. Panguva imwecheteyo, runako rweNorth Korea rwuri kushingairirawo pazviitiko zvakawanda zvemagariro senge izwi rakanaka reGuta reJiande, kudya kwemanheru kwevakweguru paDhiviri Pfumbamwe Mutambo, mari yeSpring Breeze Action yeJiande City Sanitation Center, iyo mari yevadzidzi vekoreji vanoshaya, pamwe nekubatana nehurumende yemuno kuvaka mapaki evagari vemumusha. .
Simbisa kukosha kwechiratidzo kuburikidza nehunyanzvi hwekuvandudza
"Kana iwe usingakwanise kutora mukana wemasaisai, iwe unozopedzisira wabviswa nenguva nyowani," akadaro Lin Jinxiang.
Mumakore achangopfuura, neruzivo rwe data hombe, huchenjeri hwekunyepedzera, neInternet, North Korea neUnited States vakadaira zvine mutsindo kudanidziro yenyika yekuvandudza mhando, kuwedzera shanduko yetekinoroji, kuwedzera nzvimbo dzekushandira zvigadzirwa, uye kuwedzera nzira dzekutengesa. Nhasi, Chaomei ane ekutanga-kirasi yekuyedza nzvimbo, maR & D nzvimbo uye e-commerce nzvimbo kumba nekune dzimwe nyika. Iyo kambani inovandudza uye inogadzira zvigadzirwa zvinopfuura zana mamodheru uye maratidziro mumaviri akateedzana ekudzivirira kwekufema uye kuwachwa kwemakemikari ezuva nezuva, uye yawana zvigadzirwa zvina uye makumi matatu nematanhatu ekushandisa pateni yemhando. Mari yegore negore yekubuditsa yakawedzera kubva pamamirioni matatu yeyuan muna 2000 kusvika pamamiriyoni mazana maviri emamiriyoni.
North Korea uye United States Internet yezvinhu Management System
Sekureva kwaLin Jinxiang, iyo kambani ichangotumirwa uye yakashandisa IoT manejimendi sisitimu ichawedzera kubatsira North Korea neUnited States kusimudzira kugadzirwa kwehunyanzvi, kudzikamisa mhando yezvigadzirwa, uye kutungamira mukuzadzikisa kudzora uye kuona kubva pakubiwa kwezvinhu zvakasvibirira, kugadzirwa kusvika pakutengesa. "China inyika hombe yekugadzira, asi mumakore achangopfuura, mamiriro epasi rese neepamba akaisa zvinodikanwa zvakanyanya paindasitiri yekugadzira. Nekutsakatika kwezvikamu zvevanhu uye zvakanakira mutengo, yechinyakare yekukura modhi yekugadzira indasitiri haina kugadzikana. Isu "tinofanira kuvimba nehunyanzvi Kugadziridza matambudziko nekukwidziridza kukwikwidza."
Kana zvasvika pakudya nhaka yemubatanidzwa, Lin Jinxiang ane zvaanoziva, "Nhaka haisi yekungosiira vana basa rekutarisira, asi semunhu ane ruzivo rwekupa mazano pazvisarudzo zvavo zvakakosha uye kuti shanduko yebasa irambe zvakanaka. Siya izvi kune vechidiki chizvarwa. "Mamwe makambani akaenzana anogona kuita zvakawanda nezvishoma pane kungova pavari nguva dzese."
Sezvaanotarisira, kuwedzerwa kwe "chizvarwa chechipiri" kwakabvumidza kusimudzira nenhaka yemweya weKorea -America, uye nekuwedzera kukurudzira kubhizimusi. Lin Jinxiang mwanakomana wedangwe, Lin Yanwei, ava mumiriri weHangzhou Municipal People's Congress uye mutevedzeri wasachigaro weJiande City Federation of Industry and Commerce. Akave akakurudzirwa naZhejiang Kudzivirirwa uye Hutano Dziviriro Zvigadzirwa Sangano Senzvimbo seinoshamisa maneja maneja weZhejiang Province uye anoona nezvekutengesa zvigadzirwa mukambani. Mwanakomana wechipiri, Lin Yanfeng, ndiye munyori webato rebato rebhizinesi, nhengo yeZhejiang Province webasainishuwarenzi yebasa reinishuwarenzi yeboka, uye mutungamiri wezve tekinoroji. Iye anonyanya kukonzera kugadzirwa. Mazhinji ekutsvagisa nekusimudzira uye kugadzirisa kweNorth Korea yekuzvimirira yekugadzira mitsara iri kubva mumaoko ake.
Lin Jinxiang akati mushure mehupenyu hwese hweinishuwarenzi yevashandi, akaitawo shamwari dzakawanda. Inishuwarenzi yebasa ibhizinesi rakanaka kwazvo. Kunze kwekuwana raramo, iri kuchengetedzawo hutano uye kuchengetedzeka kwevamwe; ibhizimusi rine mutoro. Kugadzirwa kwezvigadzirwa zveinishuwarenzi zvevashandi zvinofanirwa kuve zvakakwana uye kutevedzera mhando. Manzwiro eiyi inishuwarenzi yebasa anoratidzwa zvakajeka maari. Kuti ushandire zvirinani indasitiri uye nekunyatsosimudzira kufambira mberi kwemaindasitiri, Lin Jinxiang akashanda semutevedzeri wega mutevedzeri wemushandi weinishuwarenzi yezvigadzirwa zvevashandi muChina Textile Bhizinesi Association uye sachigaro weZhejiang Kudzivirirwa uye Hutano Dziviriro Zvigadzirwa Sangano. kuisa muenzaniso uye kushandira indasitiri yeinishuwarenzi yevashandi nemoyo wese.
"Usakanganwa chinangwa chepakutanga, ramba uchienda, uye gara uchitevera pati." Lin Jinxiang inosimudzira shanduko nekusimudzira kwekambani ine yepamusoro timu chivakwa; inoziva "Yakagadzirwa muZhejiang" ine yepamusoro bhizinesi kukura; inokwakuka ichienda kumusoro-kumagumo kungwara kugadzira uye inosimudzira "huchenjeri kuUnited States". Ikumhanyisa yakazvimirira hunyanzvi uye kugadzirisa iyo iriko system, North Korea neUnited States vari kufambira mberi murwendo rutsva rwekuvaka nyika yenyika inishuwarenzi yemuchina, kuratidza yavo yakakura-zita mutoro, uye kupa zvakanyanya kune hutano hwebasa revashandi veChinese!